Tag: mmekọrịta | Martech Zone
Eziokwu 10 Ga - eju Gị Anya Banyere Social Media
Tuesday, August 5, 2014 Satọde, Ọgọstụ 9, 2014 Douglas Karr
Otu akụkụ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya n'anya nke m hụrụ n'anya bụ otu egwuregwu nha ọ na-enye ụlọ ọrụ obere na obere, yana eziokwu ahụ bụ na ọ ka bụ West West. Ọ bụrụhaala na anyị nwere ike ịme ka ndị na-achịkwa na aka gọọmentị kwụsị ya, ejiri m n'aka na ọ ga-aga n'ihu. Nke ahụ kwuru, ana m echegharị mgbe m na-edebe post blọgụ, ozi infographic, ma ọ bụ webinar banyere ụfọdụ usoro mgbasa ozi mmekọrịta. Ebe ahụ
Olee ọrụ na Pinterest
Friday, February 22, 2013 Satọde, Febụwarị 4, 2017 Douglas Karr
Izu a a kpọrọ m ka m nọrọ na otu panel na-agwa ndị okike mpaghara okwu (ọdịyo dị ebe a) na nzukọ na Magazine Magazine. Ikekwe karịa otu ọ bụla ọzọ, ndị okike nwere ohere dị ịtụnanya iji weghara mmekọrịta nke ndị na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị ka Vine, Instagram ma ọ bụ Pinterest. Ntuziaka a na-ahụ anya na-akọwa otú ndị ọrụ si eji pin, mbadamba, ndị ọrụ ndị ọzọ na ụdị na Pinterest. Site Wishpond Early ọnụ ọgụgụ na Pinterest kwuru banyere ngwa ngwa doro site